DAAWO:- Murashax Ameeriko oo ololaha xoogan ka wada wadamo ka tirsan Yurub - Hablaha Media Network
DAAWO:- Murashax Ameeriko oo ololaha xoogan ka wada wadamo ka tirsan Yurub
HMN:- Danjirihii hore ee Soomaaliya u fadhin jiray dalka Kenya Amb. Maxamed Cali Ameeriko oo ka mid ah murashaxiinta Madaxweynaha Soomaaliya ayaa socdaal ku saabsan ololahiisa doorashada ku kala maray wadamada Holland iyo Ingiriiska, halkaasi oo si diiran loogu soo dhoweeyay.
Amb. Ameeriko ayaa ka mid ah u tartatamayaasha jagada Madaxweynaha ee doorashada dhacaysa 30 November wuxuuna dadaal ugu jira sidii dadka Soomaaliyed uga heli lahaa taageero ku saabsan qorshihiisa is bedel lagu sameynayo hoggaanka hadda jira.
Dadka ku soo dhaweeyay London markii uu ka degayay garoonka Diyaaradaha Heathrow waxaa ka mid ahaa Ra’iisal wasaarihii dowladda KMG ah ee Soomaaliya Nuur Xasan Xuseen oo loo yaqaano Nuur Cadde.
Sidoo kale, Maxamed Cali Ameeriko wuxuu socdaal ku maray wadanka Holland, halkaasi oo uu kula kulmay jaaliyadda Soomaalida, isagoo ugu warbixiyay xaalada dalka iyo sida xiligaan loogu baahan yahay isbadal ka dhaca dalka.
Musharax Madaxweyne Maxamed Cali Americo ayaa sheegay in amniga iyo daryeelka Ciidamada Soomaaliya ay tahay qorshihiisa ugu horeeya oo uu wax ka qaban doono haddii loo doorto jagada Madaxweynaha Soomaaliya doorashada dhacaysa 30-ka Novembar ee sanadkan.
“Waa inaan amniga xooga saarnaa, aniga haddii ilaahay yiraahdo haddii la i doorto waxaan ballan qaadaya in aan xooga saari doono amniga dalka iyo cadaalada”ayuu yiri Amb Maxamed Cali oo sheegay in Soomaaliya u baahan tahay cadaalad iyo garsoor hufan.
Musharax Madaxweyne Maxamed Cali Americo waxaa uu ballan qaaday inuu daryeel caafimaad iyo waxbarasho lacag la’aan ah dalka oo dhan gaarsiin doono haddii uu ku guuleysto doorashada Madaxweynimo ee Soomaaliya.